အလင်းကွန်မြူနစ်အဖွဲ့ကိုလမ်းညွှန် – LLCO
ကမ္ဘာကြီးကိုသည်မှောင်မိုက်၌ ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါတစ်ခုတည်းအများဆုံးထင်ရှားတဲ့တကယ်တော့ယနေ့ကြွယ်ဝသောနိုင်ငံများနှင့်ဆင်းရဲသောနိုင်ငံများအကြားကွာဟမှုသည်။ ဘီလျံပေါင်းများစွာငတ်မွတ်ခေါင်းပါး၏အစွန်းတွင်နေထိုင်လျက်ရှိသည်။ တဝက်ကျော်ဟာကမ္ဘာ့ထက်နည်း3ဒေါ်လာတစ်နေ့၌နေထိုင်ပါတယ်။ ဘီလီယံကျော်ရေမှဝင်ရောက်ခွင့်မရှိပါဘူးရှိသည်။ လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်၏ကျယ်ပြန့်အများစုကပဲအသကျရှငျနေတဲ့တိုကျပှဲဖြစ်ပါတယ်။ နယ်ချဲ့ဝါဒသင်္ချိုင်းတွင်းကိုကိုက်သို့မြေတပြင်လုံးနိုင်ငံများတွင်လှည့်, ဗုံးချမိုးရွာ။ အမျိုးသမီးများနေ့နေဆဲကမ္ဘာကြီးအနှံ့ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့တူကုသနေကြသည်။ ကျူးကျော်ရပ်ကွက် မပေါက်ပါဘူး။ ပိုပိုပြီးကလူရိုးရှင်းစွာအမှိုက်ကဲ့သို့အစွန့်ပစ်လျက်ရှိသည်။ သမုဒ္ဒရာအဆိပ်သင့်နေကြသည်။ မီးခိုးနှင့်မိုက်မိုးကောင်းကင်။ သစ်တောများသွားပြီ။ မြေကြီးတပြင်ဂေဟစနစ်ကပ်ဆိုးကြီးဆီသို့အကြီးအကဲလည်းဖြစ်သည်။
တစ်လမ်းထွက်ရှိပါသည်။ ပြီးခဲ့သည့်ရာစုနှစ်ခုအကြီးထိုးဖောက်ရှိခဲ့သည်။ ခဏ, လူတွေသန်းပေါင်းများစွာရာပေါင်းများစွာတော်လှန်ရေးနှင့်အတူ၎င်းတို့၏တွေအများကြီးထဲမှာပစ်ခြင်းငှါအတူတူရပ်နေ၏။ သန်းပေါင်းများစွာသောရာပေါင်းများစွာဟောင်းလမ်းအလုပ်လုပ်မခံခဲ့ရကြောင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ တစ်ဦးကအစွန်းရောက်ဖြေရှင်းချက်လိုအပ်ခဲ့သည်။ သူတို့ကလူ့အဖွဲ့အစည်းဟာအနက်ရှိုင်းဆုံးအဆင့်မှာ နောက်တဖန်စတင်ရန် ခံရဖို့ရှိတယ်လို့သဘောပေါက်လာတယ်။ ဤရွေ့ကားကွီးနှစျတော်လှန်ရေးလှိုင်းတံပိုးအကောင်းဆုံး Bolsheviks နှင့်မော်ဝါဒီများကကိုယ်စားပြုနေကြသည်။ အဆိုပါ Bolshevik တော်လှန်ရေး 1950 ခုနှစ်တွင်လုပ်ကြံခံခဲ့ရနှင့်တရုတ်နိုင်ငံအတွင်းရှိမော်ဝါဒီတော်လှန်ရေး 1970 ခုနှစ်တွင်လုပ်ကြံခံခဲ့ရသည်။ ကျနော်တို့ 1917. မျှဆိုရှယ်လစ်ပြည်နယ်များရှိပါတယ်မတိုင်မီလီနင်နဲ့တူရပ်တယ်။ မုန်တိုင်းရှေ့တော်၌ထိုအေးဆေးတည်ငြိမ် – ကျနော်တို့လာမယ့်မျာထည်းထည်း, တော်လှန်ရေးရဲ့နောက်လှိုင်းလုံးရှေ့တော်၌ရပ်။
အဆိုပါတာဝန်ခုန်-start မှလာမယ့်ကြီးမြတ်လှိုင်း, လာမယ့်ကြီးမြတ်အောင်မြင်မှုများလုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုအပေါ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့စီးအလင်းကွန်မြူနစ်တို့သည်ပြန်လည်မွေးဖွားအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကွန်မြူနစ်လှုပ်ရှားမှု၏သီအိုရီများနှင့်အလေ့အကျင့်များတည်ထောင်ကြေညာခဲ့ကြသည်။ အတွေးအခေါ်လက်နက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ဝေးနှင့်ကျယ်ပြန့်ကဒီလက်နက်ကိုဖြန့်ဝေရပေမည်။ သူတို့အဟောင်းအင်အားကြီးနှုတ်နှင့်ကမ္ဘာဂြိုဟ်လွတ်မြောက်ရန်လိမ့်မယ်တဲ့အမှတ်တံဆိပ်နယူးပါဝါတည်ဆောက်စေခြင်းငှါဒါကျနော်တို့က, Proletarian “တတိယ” ကမ္ဘာ့ဖလား၏ထု၏လက်၌ထားရမယ်!
ကျနော်တို့လိုင်း, ခေါင်းဆောင်မှုနှင့်ဝတ်ပြုနှင့်အတူစည်းလုံးညီညွတ်, နှင့် Bourgeois “ပထမ” ကမ္ဘာ့ဖလားရန်သူအပေါ်အောင်ပွဲဖြည့်စွက်ရန်အထုကိုလမ်းပြဖို့အဖွဲ့အစည်းရှိသည်။ အဆိုပါချဉ်းကပ်ဂလိုဘယ်ပြည်သူ့စစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နဖူးစည်းစာတန်းပျံသန်းမည်! စည်းလုံးတကမ္ဘာလုံးရပ်နကြှနျုပျတို့သညျဤပုပ်စနစ်ကတပ်များအပေါင်းတို့နှင့်ဖိနှိပ်မှုအခမဲ့လှပသောနယူးကမ္ဘာမြေဖန်တီးမည်!
© 2022 အလင်းကွန်မြူနစ်အဖွဲ့ကိုလမ်းညွှန်.